माओवादी केन्द्र | Nepal Flash
माओवादीले ६ जना विद्यार्थी नेताहरूलाई बनायो केन्द्रीय सदस्य
पञ्चा सिंह अखिल (क्रान्तिकारी) अध्यक्ष बनेपछि माओवादी केन्द्रले क्रान्तिकारीका पूर्वअध्यक्षसहित ६ जनालाई पार्टीको केन्द्रीय सदस्य बनाएको छ । आइतबार बिहान प्रचण्ड निवास खुमलटारमा बसेको बैठकले क्रान्तिकारीका पूर्वअध्यक्ष रञ्जित तामाङसहित ६ जनालाई पार्टीको केन्द्रीय सदस्य बनाएको हो । पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल...
मन्त्रीको टुंगो लगाउन आज माओवादी केन्द्रको स्थायी कमिटी बैठक बस्दै
काठमाडौं । पार्टीबाट सरकारमा सहभागी हुने मन्त्रीहरूको नामका विषयमा छलफल गर्न नेकपा माओवादी केन्द्रको स्थायी कमिटी बैठक आज बस्दै छ । गत २९ असारमा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले हालसम्म पनि मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता दिन सकेका छैनन् । सरकारलाई...
माओवादी स्थायी कमिटी बैठक ३ बजे बस्दै
काठमाडौं।आज नेकपा (माओवादी केन्द्र) को स्थायी कमिटी बैठक बस्ने भएको छ । पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडामा ३ बजे बैठक बस्न लागेको हो । बैठकमा सरकारमा पठाउने मन्त्रीको नामबारे छलफल हुने जनाइएको छ । बैठकले अखिल क्रान्तिकारीको अध्यक्षको टुंगो समेत लगाउने...
असल कम्युनिष्टबीच एकता आवश्यक छ : वर्षमान पुन
भक्तपुर । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का स्थायी समिति सदस्य वर्षमान पुनले माओवादी केन्द्रका नेतृत्वमा कम्युनिष्ट पार्टी बनाउन लागिएको बताएका छन् । वाइसीएल सूर्यविनायक नगर भेलालाई शनिबार सम्बोधन गर्दै उनले कम्युनिष्टहरूलाई एकताबद्ध बनाउने जिम्मेवारी आफ्नो पार्टीको भएको बताए । उनले भने,...
माओवादी बैठकमा नेताहरुको कार्य विभाजनबारे छलफल
काठमाडौं ।सत्ता साझेदार नेकपा माओवादी केन्द्रले पार्टी नेताहरुको कार्य विभाजनसम्बन्धी छलफल सुरु गरेको छ । पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडामा शनिबार बसेको स्थायी समिति बैठकमा पार्टीका नेताहरुको कार्य विभाजन, आसन्न पार्टीको राष्ट्रिय सम्मेलन तयारीलगायतका सांगठनिक कामलाई टुंगो लगाउने गरी छलफल सुरु...
'चुनावपछि माओवादी प्रमुख पार्टी, सरकारलाई पूर्णता दिन सोमबारदेखि सघन छलफल'
काठमाडौं ।नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आगामी चुनावमा आफ्नो पार्टी फेरि प्रमुख शक्ति बन्ने आधार तयार भएको दाबी गरेका छन् । शनिबार काठमाडौंमा शुरु भएको केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा समसामयिक परिस्थितिबारे संक्षिप्त रिपोर्टिङगर्ने क्रममा प्रचण्डले आगामी निर्वाचनसम्म आउँदा माओवादी...
पार्टीको महाधिवेशन पुस ११ देखि १३ मा गर्ने प्रचण्डको प्रस्ताव
काठमाडौं ।नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आउँदो पुस ११, १२ र १३ मा महाधिवेशन गर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । शनिबारदेखि सुरु भएको माओवादीको केन्द्रीय समितिको पूर्ण बैठकमा अध्यक्ष प्रचण्डले उक्त प्रस्ताव पेश गरेका हुन् । प्रचण्डले आफनो राजनीतिक...
सरकारलाई सफल पार्ने अभियानमा लाग्न प्रचण्डको निर्देशन
काठमाडौं । सत्ता साझेदार नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकारलाई सफल बनाउने अभियानमा केन्द्रित हुन पार्टीका नेता, कार्यकर्तालाई आह्वान गरेका छन् । शुक्रबार अपरान्ह पार्टी केन्द्रिय कार्यालय पेरिसडाँडामा आयोजित पार्टी स्थायी समिति बैठकमा बोल्दै उनले सो आह्वान गरेका...
नेकपा माओवादी केन्द्रको स्थायी कमिटी बैठक शुरू भएको छ । स्थायी कमिटी बैठककेन्द्रीय पार्टी कार्यालयपेरिसडाँडामाशुरू भएको हो । भोलि (शनिबार) देखि केन्द्रीय कमिटी बैठक शुरू हुने भएकाले त्यसको एजेन्डा तय गर्न शुक्रबार स्थायी कमिटी बैठक बसेको हो । बैठकमा सरकारमा...
प्रचण्डको भ्याकेट निवेदन खारेज, एमाले रोजेका जनप्रतिनिधिको पद कायमै
सर्वोच्च अदालतले माओवादी केन्द्रको पुनरावलोकन निवेदन खारेज गरेको छ।एमाले गएका पूर्वमाओवादी जनप्रतिनिधिको पदबहाली गर्ने कदमविरूद्ध अदालत गएका केन्द्रको पुनरावलोकन निवेदन न्यायाधीशहरू डा. आनन्दमोहन भट्टराई, बमकुमार श्रेष्ठ र डा. मनोजकुमार शर्माको इजलासले खारेज गरेको हो। प्रचण्डले साउन ७ र २० गते...
प्रचण्डको ब्रिफिङ : माधवजी अप्ठ्यारोमा हुनुहुन्छ, एमाले एकतामै जाने सम्भावना छ
काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल समूह सरकारमा नआउने बताएका छन् । आइतबारबसेकोपार्टीको स्थायी कमिटी बैठकमा प्रचण्डले &#39;माधव नेपाल समूह सरकारमा नआउने&#39; सुनाएका हुन् । माधव समूह सरकारमा नआउने भएपछि अब...
काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय समिति बैठक १० दिन पछि सरेको छ । आइतबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडामा बसेको स्थायी कमिटी बैठकले साउन २० गते तोकिएको बैठकलाई साउन ३० गतेलाई सार्ने निर्णय गरेको हो । बैठकले वर्तमान राजनीतिक गतिविधि...
मन्त्री टुंगो लगाउन माओवादी केन्द्रको स्थायी समिति बैठक बस्दै
काठमाडाैं।सरकारमा सहभागी हुनेको नाम टुङ्गो लगाउन नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले स्थायी समितिको बैठक बस्दै छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले शपथ लिएको २० दिन पुग्दा पनि सरकारलाई पूर्णता दिन नसकेको भन्दै आलोचना भएपछि छिटो मन्त्रीको नाम टुङ्ग्याउन दबाब छ । बैठक आज...
गण्डकीमा माओवादीले टुङ्गो लगायो तीन मन्त्रीको नाम
पोखरा । गण्डकी प्रदेश माओवादी केन्द्रले सरकारमा जाने तीनजना मन्त्रीको टुङ्गो लगाएको छ । नयाँ सरकार गठन भएको झण्डै डेढ महिना वितिसक्दा समेत सत्तारुढ दलबीच मन्त्रालयको भागबण्डा र पार्टीका तर्फबाट मन्त्री हुनेको टुङ्गो लगाउन नसक्दा मन्त्रिपरिषद विस्तार हुन सकेको थिएन...
सरकारमा जाने मन्त्रीबारे छलफल गर्न माओवादी केन्द्रको स्थायी कमिटी बैठक बस्दै
काठमाडौं । आज पार्टी कार्यालय पेरिसडाँडामा माओवादी केन्द्रको स्थायी कमिटी बैठक बस्ने भएको छ । उक्त बैठक नयाँ बनेको सरकारमा जाने मन्त्रीहरुबारे निर्णय गर्न बैठक बस्न लागेको स्थायी कमिटी सदस्य गणेश शाहले जानकारी दिए । बैठक दिउँसो २ बजे बस्ने...
प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने माओवादीको निर्णय
सत्ता साझेदार नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई विश्वासको मत दिने निर्णय गरेको छ। आइतबार सिंहदरबारस्थित दलको कार्यालयमा बसेको नेकपा माओवादी केन्द्र संसदीय दलको बैठकले प्रधानमन्त्री देउवालाई विश्वासको मत दिने निर्णय गरेको हो। आज दिउसो ४ बजे आह्वान गरिएको संसद...
हाम्रो लागि राजनीतिभन्दा जनता ठूलो : अध्यक्ष प्रचण्ड
चितवन । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विपद्को समयमा आफ्नो लागि जनताको जीउ धनभन्दा ठूलो अरु नहुने बताएका छन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवनले मंगलबार आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले विपद्मा राजनीति भन्दा ठूलो...
नेकपा माओवादी केन्द्रले पहिलोपटक निर्वाचनबाटै अध्यक्षसहित पदाधिकारी चयन गर्ने भएको छ । उसले आउँदो महाधिवेशनबाट अध्यक्ष, पदाधिकारी, स्थायी समिति र पोलिटब्युरो चयन गर्ने भएको हो । अहिलेसम्म निर्वाचनमार्फत नेतृत्व चयन नगरेको माओवादी केन्द्रमा प्रचण्ड अनवरत नेतृत्वमा छन् । प्रजातान्त्रिक प्रक्रियाबाट...